Fanatsaràna an’Antananarivo | GAZETY_ADALADALA
Posted on 02/07/2010 by gazetyavylavitra
Nikarakara ny zaridaina sy ny sehatra maitso eran’ny tanànan’Antananarivo ny C.U.A. Araka ny filazan’ireo tompon’andraikitra amin’izay dia noho ny maha-ivon’ny Madagasikara azy fa tsy noho ny fahatongavan’ny faha-50 taonan’ny Fiverenan’ny Fahaleovantena fotsiny.
Isan’ireny ny ao Ampasika. Tsy tokony hisy intsony ny fanentanana ny olona hoe ‘hajao sy arovy ary kolokoloy ny zaridainantsika‘ fa tokony handeha ho azy izany. Fananana iaraha-manana rahateo ireny.
Fanambin’ny C.U.A ny hanome ny sahaza ho azy ny vahoaka, hoy izy ireo, ka izany no antony nanaovana ny hetsika.
Mampalahelo anefa ny mahita ny zavatra nandaniana aina sy fotoana simbain’ny ‘vahoaka’ ihany toy ireny. Tokony hifanabe sy hifampitondra izany ny ‘isika samy isika‘ fa tsy voatery hasiana mpiambina akory ireny zava-bita ireny. Tokony hosarotiny amin’ireny ny tsirairay.
Taorian’ny Ampasika, Mahamasina,Antanimbarinandriana, Senat, Avenue izay natao tao anatin’ny roa volana monja, Masay sy Andohalo no nasiana mpiambina manokana noho izy ireny misy foto-drafitrasa hafa ankoatry ny zaridaina.
Ny andraikitry ny tsirairay:
Fokontany: nasiana fanentanana fanatsarana teny, ary dia niezaka nanatsara sy nanadio ny FKT, nametraka voninkaza sns
Pompier: manampy amin’ny fanondrahana sy fanadiovana ny tanana.
sampan’asa hafa: mpiara-miombon’antoka « tia an’Antananarivo », ka isan’ireny ny GASTRO PIZZA nikarakara ny Andrefan’Ambohijanahary hatrany Soanierana
mponina manodidina: misy izy ireny no manome tànana sy miaro ary manondraka ireny zaridaina kely napetraka ho haingon’ny tanàna ireny
Misy ‘sites’ maromaro eto Antananarivo raha io resaka ‘sehatra maitso’ io. Isaky ny ‘site’ tsirairay dia misy tomponandraikitra ka ahitana olona fito na valo eo izay mikarakara ny zaridaina. Mpiasan’ny C.U.A sampana sehatra maitso ireo. Ankoatra ireo dia mbola misy zana-tsampana hafa maromaro ao anatiny ao, arakaraka ny fahaizana manokana sy andraikitra takian’ilay asa atao. Mba ho Antananarivo mirindra sy maha-te honina tokoa Antananarivo dia apetraka arakaraky ny toerana ny voninkazo. Misy voninkazo mety amin’ny toerana iray, misy tsy mety eo amin’io toerana io noho ny toe-tany misy eo. Apetraka koa arakaraky ny hoe ‘toerana fitsangatsangana sa tsia,be mpandalo sa tsia, sns…’
Fepetra noraisina manokana momba ny tsenan’i Mahamasina ny hoe averina hofefena ny zaridaina, entanina koa ny mpivarotra isak’Alakamisy tsy hanao maloto sy hanipy ranon-dolana any anaty zaridaina. Hisy araka izany ny fanaraha-maso mba ho fifanabeazana tsy hiafara amin’ny fanasaziana. Faharoa dia angamba hasiana ora fivohàna sy fikatonana toy ny eny Ambohijatovo ihany koa mba tsy ho baranahiny sy ho simbasimba foana ny eo amin’io sehatra maitso Mahamasina io.
Fanentanana manokana: Vahoaka miasa sy miady amin’ny fiainana ny vahoaka eto Antananarivo. Noho izany tsy fisian’ny fotoana fakana aina noho ny fitadiavana izany, dia mitady fotoana sy toerana mba hahafahana miala voly kely ny olona. Tsy voatery handeha lavitra ho eny amin’ny By-Pass foana. Fa rehefa tonga ny fety dia mba afaka misitraka ireny aty afovoan-tanana aty ihany. Ny mahagaga anefa dia isaky ny tonga ny fety dia simba ny tanàna sy ny zaridaina rehetra. Miverina manamboatra indray. Toa tsy tsapan-tsika fa soa ho an’ny vahoaka tsirairay, fahafinaretana ho an’ny tsirairay, lova ho an’ny taranaka aoriana no nanaovana ireny rehetra ireny.
Raha Mahamasina monja no resahana dia azon’ny mpiandry marary, mpivarotra, mpiandry taxibe, mpianatra hialana sasatra na hiandrasana fotoana eo rehefa tonga ny fotoana voatondro ho fivohan’ny zaridaina. Aoka ho tandremana ny fahadiovana, hosorohana ny fanimbana. Fanajana ireo niasa nanatsara izany ary fanajanao ny tenanao ihany koa satria misy volanao nirotsaka tao, na mivantana io na ankolaka.
Filed under: fiaraha-monina, tapatapany, tontolo iainana | Tagged: Ambohijatovo, Ampasika, Antananarivo, CUA, Madagasikara, Mahamasina |
« DTS Moov – ADSL – marina ve izany? Momba an’i Y-Zit »